SIDA LOO DHISO XAYNDAAB XAFIIS LEH GACMAHAAGA? - DHISMAYAASHA
Deedka ubax waa wax aad u xiiso badan oo qurux badan. Dhererka xayndaabka way kala duwanaan karaan waxayna ku xiran tahay rabitaanka macaamiisha.
Oggolow, inta badan waxaa laga yaabaa inaad la kulanto su'aasha ah in xayndaabka sare lagu xalliyo waa go'aan aan mugdi ahayn.
Tani waxay sababi kartaa waxyaabo badan, oo ay ku jiraan muusikada. Tani waxay leedahay dayrarka qurxinta ee sariiraha ubaxa, taas oo si wanaagsan u qurxin doonta meesha ubaxyada. Xayndaabka noocan oo kale ah waxaa loo isticmaali karaa oo kaliya maaha hagaajinta ubaxyada, laakiin sidoo kale waxyaabo badan oo kale: Gawaarida, meelihii madadaalada, qaybta beerta, cawska, iwm.
Haddii aad go'aansato inaad deynkaas oo kale ku dhajiso goobahaaga gadaashiisa, ogow in go'aanka noocan oo kale uu leeyahay macnayaal qurxin leh marka loo eego mid kasta oo ka hortag ah.
Waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah ku yeelato quruxda heesaha ee xayndaabka ubaxyada ubaxyada, iyo markaa waxaad dareemi kartaa awood buuxda ee dareenka!
Xayndaab caag ah
Iyadoo la hirgelinayo alaab la yiraahdo caag ah (PVC) oo ku saabsan suuqa dhismaha, baahida loo qabo alaabooyin badan oo kala duwan ayaa bilaabay inay hoos u dhacaan.
Tani waxay caan u tahay sharraxaadda, maxaa yeelay caaggu wuxuu leeyahay dhowr sifo oo wanaagsan oo aan laga helin qalabka kale ee dhismaha.
Waxaa laga yaabaa in tayada ugu badan ee suurtagal ah ee balaastiggu uu yahay iska-caabbinta xagasha heerkulka xilliyeed. Marka laga soo baxo tan, waxaa suurtagal ah in lagu dhajiyo xayndaab caag ah oo ku taal goobtaada ficil ahaan wakhti kasta oo sanadka ah, waxayna socon doontaa mudo dheer.
Waa in la ogaadaa in tilmaamayaasha heerkulka xaddidan ee xayndaabka caagga ah, taas oo ay ku sugnaan doonto muddo dheer, waa -15 / + 50 darajo Celsius.
Waxaa ka mid ah sifooyinka kale ee faa'iido leh ee xayndaab caag ah, waxaa haboon in la xoojiyo in xayndaabka noocan oo kale ah uu u adkaysto saamaynta asiidhka, cusbada, iyo dufannada, iwm. Habka teknoolojiga ee soo saarista qashin caag ah oo lagu qurxiyo waa in lagu daro wax soo saarka kiimikada polyvinyl. Marka xigta, ku dar waxyaalo dheeraad ah iyo isbeddeleyaal oo gacan ka geysta sii kordhinta nolosha xayndaabka.
Talooyin loogu talagalay boqoshaada sii kordhaya ee guriga.
Halkan ka raadi sida loo doorto filim lagu koriyo.
Cabbirada geedo-geedeedka polikarbonat //rusfermer.net/postrojki/sadovye-postrojki/teplichnie-soorujeniya/teplitsa-iz-polikarbonata-svoimi-rukami.html.
Xayndaab la taaban karo
Deedka Tani waxay leedahay faa'iidooyinka soo socda:
Kharashyada hawlgalka oo yar;
Noocyo kala duwan ee suuqa, iyo sidoo kale midabada;
Noocyo kala duwan;
Waa in la ogaadaa in dayrarka la taaban karo uusan ka badneyn lebbiska lafdhabarta ee cimriga. Waxa kale oo aad u xiiso leh in la ogaado in mitirka socodka ee xayndaabka noocan oo kale ah ka raqiisan yahay lebbiska lebiska.
Xaqiiqo kale oo xiiso leh waa maqnaanshaha baahida loo qabo in la aasaaso saldhigga wareegga wareegga xayndaabka.
Deedka dayactirku ma sii xumaanayo mana u baahna dayactir.
Xayndaab alwaax ah
Deedka Wooden - qayb muhiim ah ee naqshadeynta dhulka beerta.
Dayrarka Wooden wuxuu u adeegi karaa ujeedooyin kala duwan, kuwaas oo si gaar ah u haboon in ay muujiyaan qurxinta.
Mudnaanta in milkiilaha oo dhan loo hanuuniyo sida loo doorto xayndaab waa jawi saaxiibtinimo, taas oo lagu daro xayndaab alwaax ah.
Noocka noocan ah wuxuu u baahan yahay daryeel weyn. Laakiin waqti isku mid ah, waxaa lagama maarmaan ah in la tilmaamo quruxda iyo esteemka ee xayndaabka noocan oo kale ah, sidaas oo ay u roon tahay indhaha milkiilaha hadda.
Beerta Bench la gacmahooda - talooyinka milkiilayaasha.
Akhriso sida loo dooranayo taangiga dakhaarka ee dacha //rusfermer.net/postrojki/hozyajstvennye-postrojki/vspomogatelnye-sooruzheniya/dachnyj-dush-svoimi-rukami-garantirovannyj-komfort-i-svezhest.html.
Wasaaradda Beeraha ee Ruushka
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Dhismayaasha 2019